Shar Mal – ရှာမယ် Blog – Myanmar Ads, Listings, Classified website, Providing latest Mobile,Phone, Cloth, Dress, Fancy, Jewellery, Laptop, Computer, Instruments, Musical equipments, Camera, Electronic and Household Listings. အွန်လိုင်းမှာ အ၀တ်အစား ဖန်စီ အသုံးအဆောင် ဖုန်း ကွန်ပြူတာ ကင်မရာ ဂီတ တူရိယာများ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ရောင်းမယ် ၀ယ်မယ်
Shar Mal – ရှာမယ် Blog
Myanmar Ads, Listings, Classified website, Providing latest Mobile,Phone, Cloth, Dress, Fancy, Jewellery, Laptop, Computer, Instruments, Musical equipments, Camera, Electronic and Household Listings. အွန်လိုင်းမှာ အ၀တ်အစား ဖန်စီ အသုံးအဆောင် ဖုန်း ကွန်ပြူတာ ကင်မရာ ဂီတ တူရိယာများ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ရောင်းမယ် ၀ယ်မယ်
ရန်ကုန်မြို့ မှ အကောင်းဆုံး Nightlife Bar (၁၀) ခု
The Best Top Ten Bar In Yangon 50th Street လမ်း(၅၀) အောက်ဘလောက် မှာ ရှိတဲ့ ဘားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်စဉ် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲလေးတွေနဲ့ အတူ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေ အမြဲပေးတက်ပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲ ဝါသနာ အိုးများအတွက် ဘောလုံးပွဲများကို Live TV ကြည့်ရှုရင်း အစားအသောက်များကို အရသာခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီယာ၊ကော့တေး တို့ ကို Promotion နဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ဖို့ အမြဲစီစဉ်ပေးတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ အရသာရှိတဲ့ BBQ နဲ့ အထူး Special Menu တွေကိုလည်း အပတ်တိုင်း မရိုးနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ KOSAN 19th…
သင့်လုပ်ငန်းကို အွန်လိုင်းမှာ အခမဲ့ ကြော်ငြာနိုင်သော website ၆ ခု
https://www.ads.com.mm ads.com.mm မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ကားများ၊ အိမ်ခြံမြေများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာအသစ်၊အဟောင်းများ ကို အခမဲ့ကြော်ငြာနိုင်ပါတယ် ၀ယ်ယူလိုသူများအနေနဲ့လဲ used များ secondhand များလည်းရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် အားသာချက် – ပင်မစာမျက်နှာမှာ မြေပုံ နဲ့အလွယ်တကူထောက်ပြီးရှာနိုင်တယ် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် မြန်မာပြည်က… … အသုံးပြုသူများပြီး update ဖြစ်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တယ် mobile အတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် အားနည်းချက် – အားနည်းချက် မရှိသလောက်ကို website ကအလွန် functional ဖြစ်ပါတယ် http://www.kaymu.com.mm Kaymu ဟာလည်း အရမ်းကြီးတဲ့ web portal တစ်ခုပါ function…
ads classified free listings Online shopping Read more
အင်တာနက်မှာ အခမဲ့ English စာ လေ့လာဖို့ သင့်လျော်သာ website ၄ ခု
www.youtube.com ကိုယ်ပိုင် seft study လုပ်တဲ့ သူတွေအဓိက အားကိုးရတဲ့ website က www.youtube.com ပါပဲ အင်္ဂလိပ် စာလေ့လာဖို့ ပထမဆုံးညွှန်းချင်တာကတော့ youtube ပါပဲ တခါတရံ အိမ်မှာနေပြီး dictionary တို့ ebook တို့ထိုင်ဖတ်နေခြင်းဟာ လူကိုငြီးငွေ့စေနိုင်ပါတယ် youtube မှာ4skills အားလုံးကို video file နဲ့လေ့လာနိုင်တာမို့ ငြီးငွေ့ဖို့ သိပ်မရှိပါဘူး.. http://lang-8.com ဒုတိယအနေနဲ့ညွန်းချင်တာက lang-8 ပါ သူကလည်း facebook တို့လို social network website လိုမျိုးပါပဲ ဘာသာစကားပေါင်း ၉၀ ကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀…
English Learning Online Seft Study Read more
Copyright © 2017 Shar Mal – ရှာမယ် Blog | |